Chii Jesu akanyora mujecha? | Apg29
Uchaona mhinduro inonakidza!
ndima yeBhaibheri apo Jesu akanyora pasi (ndiko pasi, kwete jecha), tinowana nyaya chifeve tikatyisidzirwa nematombo nokuda vaFarisi nevanyori.
John 8: 6-8. Izvi vakati, vachimuidza, uye ave nechavangamupomera. Asi Jesu akakotama uye nomunwe wake pasi. 7 Kana vakamira uye vakamubvunza, akatwasuka akati: ". Usina chivi anogona kukanda ibwe rokutanga panguva kwaari" 8 Zvino akakotamirazve pasi, akanyora pasi.
Ndakabvunzwa kamwe naJesu akanyora mujecha. Uchaona mhinduro inonakidza.
Ngativerengei rose akapoteredza kuti kurinzwisisa nani.
Mangwanani akauya shure kutemberi nzvimbo. Vose vanhu vaungana vakamukomba, uye akagara pasi akavadzidzisa. 3 Zvino vanyori nevaFarisi vakauya kwaari nemukadzi wakabatwa mukufeva. Vakamuradzika pamberi dzavo 4 uye vakati, "Mudzidzisi, mukadzi uyu abatwa achiita, kana iye akaita upombwe. 5 MuMutemo Mosesi akatirayira kutema nematombo. Ko iwe unoti?" 6 Izvi vakati, vachimuidza, uye ave nechavangamupomera. Asi Jesu akakotama uye nomunwe wake pasi. 7 Kana vakamira uye vakamubvunza, akatwasuka akati: ". Usina chivi anogona kukanda ibwe rokutanga panguva kwaari" 8 Zvino akakotamirazve pasi, akanyora pasi.9 Vakati vanzwa izvozvo, vakaenda, mumwe nomumwe, kutanga vakuru, uye akasara ari oga, uye mukadzi akamira ipapo. 10 Jesu akatwasuka akati kwaari, "Mai, varipiko? Hapana akutonga here?" 11 Iye akati, "Kwete, Ishe, kwete." Jesu akati, "Neniwo handikupi mhosva. Haachipo Go uye chivi!"
Jesu akaratidza nezviito
Mumharidzo Bhaibheri chikamu ichi, isu kazhinji vaingoita pachena zvinotaura Jesu kuti uyo asina chivi kukanda ibwe rokutanga, uye ipapo vakaenda akarova nemashoko aJesu nekuti havana pasina chivi.
Asi Jesu kuita yokunyora kaviri pasi nomunwe wake chokuita zvaanotaura.
Izvi zvakaitwa vaFarisi nevanyori. Ivo mistook kwete Jesu vairatidzira.
Pavakanzwa zvakataurwa naJesu uye akaona Achiratidza yake, saka vaiziva chaizvo zvaaireva. Zvavaikwanisa Bhaibheri mukati uye panze uye aiziva zvazvaive.
"Vaya vanotsauka vachibva kwandiri akafanana kunyora mujecha"
In Jeremiah muTesitamende yekare makanyorwa:
Jehovha, tariro yaIsraeri. Ani naani anosiya iwe richaparadzwa. Vaya vanotsauka vachibva kwandiri akafanana kunyora mujecha. Vakarasha Jehovha, iro tsime remvura mhenyu.
Jesu akaratidza chiito ichi yavaFarisi nevanyori vakanga vatsauka uye dongo Mwari.
Apo Jesu akatiwo avo vasina chivi kukanda ibwe rokutanga, havana kugona kuita chinhu kunze kusunungura matombo uye famba kure nekuti Jesu akaratidza kunyora pasi kuti vakanga vaurayiwa kubva Mwari uye akafanana kunyora mujecha.
Chii chinoitika kuti rugwaro rwakanyorwa mujecha? The blurring nemvura uye mhepo.
Comment naJeremiya 17:13
Ishe ndiye tariro yaIsraeri
Kungofanana naJehovha tariro yaIsraeri, ndiye tariro yako. Wati wakagamuchira Jesu, une ramangwana uye netariro. Kana usina kugamuchira Jesu achazviita isati yapera.
Munhu anosiya pachake richaparadzwa
Batisisa Jesu, chero bedzi kurarama. Ipapo rimwe zuva achava kuguma kuponeswa kana wasvika kumba kudenga. Asi kusiya naye, iwe uchava vanyadziswe. Uye hapana munhu anoda kunyadziswa?
Vaya vanotsauka vachibva kwandiri akafanana kunyora mujecha.
Ichi unoshamisa uye tsananguro unbeatable Jesu akaratidzawo kuti vaFarisi nevanyori. Vakanzwisisa pakarepo naJesu akanyora mujecha apo vakatyisidzira ibwe chifeve, nekuti vaiziva zvakanaka zvakanyorwa Jeremiya 17:13. Pane yokukurumidza yakaipa kuna kusiya Jehovha. The rugwaro rwakanyorwa mujecha achapiwa kudzimwa nemhepo uye mvura.
Sei afanane uya akanyorwa mujecha? Nekuti vakasiya Jehovha.
Tsime remvura mhenyu
Jesu ndiye mvura youpenyu. Mugamuchirei ipapo å akaponesa uye vanogamuchira upenyu husingaperi. Kumusiya vaFarisi nevanyori vakaita. Vakanga vasiya tsime remvura mhenyu maererano Jeremiya 17:13, uye ipapo asina upenyu husingaperi.
V 04, tisdag 26 januari 2021 kl 13:04